Wayne Rooney Oo Si Aan Laga Fileynin U Shaaciyay In Tababare
Wayne Rooney ayaa sheegay inuu wax badan oo la xiriira kubada cagta ka bartay Louis van Gaal mudadii labada sannadood ee uu joogay Manchester United marka loo eego sagaalkii sannadood ee uu ka hoos ciyaaray Sir Alex Ferguson.
Sida ay sheegtay jariirada Daily Mirrror, halyeeyga Red Devils ayaa aad uga murugooday markii ay madaxda Manchester United ceyriyeen tababaraha reer Holland Van Gaal.
Rooney ayaa yiri: “Labadaas sannadood waxaan bartay in ka badan intii aan ka bartay tababare kale.
“Aad ayaan u murugooday markii ay Louis ceyriyeen. Aniga ahaan wuxuu ii ahaa nin aan ku riyaaqayay la shaqeyntiisa. Waxay aheyd inaan xilli ciyaareed seddexaad ceshano.
“Waxaan noqon laheyn kuwa ka xoogan sidii hore.
“Waxaan dareemay in wax walba ay soo hagaagayaan oo ay ciyaartoyda fahmeen aragtidiisa kubadeed.
“Waana sababta aan mar walba ugu mahadcelin doono isaga. Kaliya ma ahan inuu iga dhigay kabtan, laakiin sidoo kale kalsoonimada iyo aaminaada uu igu qabay.”
Ferguson ayaa Rooney ka soo kaxeeyay Everton sannadkii 2004 isagoo markaas ka dhigay da’ yarkii ugu qaalisanaa Britain.
Kabtankii hore ee England ayaa guulo ku hoos gaaray Ferguson isagoo qaaday koobab Premier League, FA Cup iyo Champions League.
Laakiin 34 jirkaan oo haatan ciyaaryahan iyo tababare ku xigeen ka ah kooxda heerka labaad ee Derby County ayaa qirtay in taatikada kubadeed ee Van Gaal inay ka dhigeyso inuu ka sareeyo tababarayaasha sida Ferguson, Roy Hodgson iyo Goran Eriksson.
Van Gaal ayaa ku guuleystay FA Cup ka hor inta aan laga ceyrinin United sannadkii 2016.
Van Gaal oo 68 sanno jir ah ayaa guulo ku soo gaaray waayihiisa tababarenimo kooxaha Barcelona, Ajax, Bayern Munich iyo xulka Holland.
Ma uusan shaqeynin tan iyo markii uu ka tagay Manchester United.